အမှာ သတင်းစကား | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အမှာ သတင်းစကား	# နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်လွှာPublished April 17, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အခါသမယမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံသား အားလုံး နှင့် တိုင်းတစ်ပါးသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများပါမကျန် အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ ရေလိုအေး၍ ပန်းလို မွှေးနိုင်ကြပါစေ ၊ ဘေးမသီရန်မခ ရှိကြပါစေ။ ကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ထို့ထက်ပို၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိအပေါ် အမြင်မကြည်လင်ခဲ့သူ ၊ စကားအခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့သူ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံးကိုလည်း နှစ်သစ်မှာ ဒီနေရာကနေ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ထားမှာ မည်သူအပေါ်တွင်မှ အညိုးအတေး အာဃာတတရား မထားခဲ့ပါ။
သို့သော် မိမိ၏ အားနည်းချက်ဖြစ်သော “ဝေဖန်မှု” များကို ချက်ခြင်းပြန်လည် တုန့်ပြန်တတ်မှုကြောင့် မလိုလားအပ်သော စကားအခြေအတင်ဖြစ်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဗေဒင်လောကမှ အချို့သော ပညာရှင်များ၏ ရေးသားချက်များကိုလည်း “ဝေဖန်ထောက်ပြမှု” များ ရှိခဲ့ပါသည်။ ကဲ့ရဲ့ လှောင်ပြောင်သလို ဖြစ်ခဲ့ခြင်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့အတွက် စဉ်းစားမိတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်။ မိမိသည် စိတ်တို ၊ စိတ်ဆတ်ပြီး မိမိအား စော်ကားလာသည်ဟုထင်လျှင် ချက်ခြင်းတုန့်ပြန်တတ်သော ဉာဉ်ဆိုးရှိပါသည်။ မမှန်တာ မဟုတ်တာတွေ လျှောက်ပြောနေသည်ဟု ထင်လျှင်လည်း ပါးစပ်အငြိမ်မနေ, လက်အငြိမ်မနေတတ်ပါ။ အသက်သာ ကြီးလာသော်လည်း ထို “ဗီဇစိတ်” ကို မဖျောက်နိုင်ခဲ့ပါ။
အမေး/အဖြေ ကဏ္ဍများတွင်လည်း အချိုးမကျသော မေးခွန်းများ ၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာမှုများ ရှိခဲ့လျှင် “ဂွစကား၊ ဘုစကား” ပြောတတ်သော ဉာဉ်ဆိုးလည်း ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သူများ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြမည်မှာ သေချာပါသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် မိမိသည် “အပေါက်ဆိုး” သော သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု ၀န်ခံပါသည်။ သို့သော် “စိတ်ထား မယုတ်ပါ” ။ မှန်သော သစ္စာစကားဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် မိမိ၏ စိတ်ရင်းအမှန်မှာ မေ့လွယ်ပျောက်လွယ်၊ ခွင့်လွှတ်လွယ်သော စိတ်မျိုးဖြစ်သည်ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ကြစေလိုပါသည်။ မိမိနှင့် ပြဿနာ ကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူများကိုလည်း “နင်ဘဲငဆ” ပြောခဲ့မိသည်များကိုလည်း တွေးမိတိုင်း စိတ်မကောင်းပါ။ အချို့ကိုလည်း စာဖြင့် ပြန်လည် တောင်းပန်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျေအေးသူများ ရှိသလို မကျေအေးနိုင်ကြသူများလည်း ရှိသေးပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုနှစ်သစ်မင်္ဂလာ အခါသမယတွင် မိမိအပေါ် ချစ်ခင်လေးစားကြသူများသာမက၊ မိမိအပေါ် အထင်အမြင် လွဲမှားနေကြသူများ အားလုံးကို ဤနေရာမှ ကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ၀န်ချတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဖက်မှ အမှားရှိခဲ့ခြင်းများကိုလည်း ၀န်ချတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သော်။
သဗ္ဗေသတ္တာ ဝေနေယျာ အားလုံး မြန်မာနှစ်သစ်တွင် ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သော်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား	# သူတို့တွေ လွတ်မြောက်ကြတော့မည်Published September 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, အမှာ သတင်းစကား, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဖိတ်ခေါ်ခြင်းPublished September 13, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged domain & hosting အခမဲ့, MaHaBote, Myanmar Astrology, ကလောင်သစ်, ကလောင်သစ် များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း, ဘလော့ဂါ, ဘလော့ဂါ အသစ်များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း, ဘလော့ဂ်	# ကျမ်းလျှောက်လျှင် မဆုံး၊ ကျမ်းပေါက်လျှင် တစ်လုံးPublished July 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ကြည့်ကြမလား ကမ္ဘာ့ဖလား ?Published May 24, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
(၄)နှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပတဲ့ 2010 ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲကြီး က နီးသည်ထက် နီးလာပြီဗျ။ ရှေ့လာမယ့် ဇွန်လ (၁၀)ရက် ဆိုရင် စ,ပြီလေ။ ဒီချိန်ကတော့ ဘောလုံးဝါသနာအိုးများသာမက ဘောလုံးဝါသနာ မပါသူများတောင်မှ အရူးထ, ကြတဲ့ အချိန် ဆိုရင်လည်း မမှားပေဘူးပေါ့ဗျာ။ ကမ္ဘာ့ဖလား ဆိုရင် အမျိုးသားများသာမက အမျိုးသမီးများတောင် Crazy အရမ်း ဖြစ်ကြတာကို တွေ့ရသဗျ။ ရှေ့လာမယ့် ဇွန်လ တစ်လလုံးကတော့ ဒီ ကမ္ဘာ့ဖလားအကြောင်း မိုးမွှန်နေအောင် ပြောကြ ဆိုကြသံတွေ ကြားကြရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ လဘ္ဘက်ရည် ဆိုင်လဲ ဒါဘဲ၊ ဘီယာဆိုင်လဲ ဒါဘဲ ၊ ဂျာနယ်တွေလဲ ဒါဘဲ . . . ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရဦးတော့မှာပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ဗေဒင်ဆြာတွေလည်း ဘယ်နေလိမ့်မတုန်း။ ဘယ်အသင်းနိုင်မယ်၊ ဘယ်အသင်း ဗိုလ်စွဲမယ်ဆိုတာ ဟောကိန်း ထုတ်ကြတော့မယ်လေ။ မကြာပါဘူး။ လာပါလိမ့်မယ် – ဂျာနယ်တွေမှာ။ ဘယ်အသင်းနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ – ဘယ်အသင်းကတော့ အုပ်စုက မတက်လောက်ဘူး။ ဘယ်အသင်းကတော့ ရှုံးထွက်မှာ ပြုတ်မယ် စတဲ့ ဟောကိန်းတွေ။
နို့ . . နေပါဦး ။ ဆရာကကော မတွက်မယ့် အထဲမှာ ပါနေလို့ ပြောတာလား ? လို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ အောင်မယ် ဘယ်နေလိမ့် မလဲဗျာ။ ဒီလိုပွဲမျိုး စောင့်နေတာ ကြာပြီဗျ။ (၄)နှစ်မှ တစ်ခါ ကြုံရတာ။ ဒီတော့ တွက်လည်း တွက်မယ်။ ကြည့်လည်း ကြည့်မယ်။ လောင်းလည်းလောင်းမယ်။ (လောင်းမယ် ဆိုတာ လဘ္ဘက်ရည်ကြေး၊ ဘီယာကြေး လောက်ပါ၊ ပိုက်ဆံကြေးကတော့ တော်ခဲ့ တန်ခဲ့ပါပြီ)
လောင်းမယ် . . ဆိုလို့ (၄)နှစ်တခါ ကမ္ဘာ့ဖလားချိန်တိုင်းမှာ “ကူးစက်ရောဂါကြီး” တစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့ “အလောင်းအစား” ကိစ္စကိုလည်း သတိထားကြဦးနော်။ တချို့က ပြောကြတယ် ။ ဘောလုံးပွဲဆိုတာ အလောင်းအစားလေး ပါမှ ကြည့်လို့ ကောင်းတာတဲ့။
မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၄)နှစ်တခါ ဒီ ကမ္ဘာ့ဖလားကြောင့် စီးပွားပျက်၊ ဘ၀ပျက် သွားရတာတွေ လည်း အများကြီးနော်။ သတိလည်း ထားကြဦး။ အသင်းလေး (၂)သင်းကန်တာကို မှန်အောင် မခန့်မှန်းနိုင်ကြလို့ “ အိမ်ပေါင်၊ တိုက်ပေါင်၊ မြေပေါင်၊ ကားပေါင်၊ ရွှေပေါင်” ဖြစ်ကုန်ကြပြီး နောက်ဆုံး ဘ၀ပျက်၊ စီးပွားပျက်ကြတာတွေ များလှသဗျာ။
အလောင်းအစားများ ရှောင်နိုင်အောင် ရှောင်ကြစမ်းပါဗျာ။ အလောင်းအစားကြောင့် ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာ သိပ်မကြားရပါဘူး။ ဘ၀ပျက်သွားတာတွေသာ နားမဆန့်အောင် ကြားရတာပါ။ ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ “ဖဲသမား မယား၊ နှဲသမား ပါး” တဲ့။ ဖေါင်းလိုက် ပိန်လိုက်၊ ဖေါင်းလိုက် ပိန်လိုက် ပါဘဲဗျာ။
တချို့ကလည်း အပိုင်ကြံကြသေးသဗျ။ ဒီလို အချိန်မှာ “ဟို ဘိုးတော်၊ ဟို နတ်ကတော်၊ ဟို အကြားအမြင် ၊ ဟို ဗေဒင်ဆရာတွေ” အားကိုးနဲ့ အပိုင်ပွဲကို အနိုင်နွဲ ကြဦးမတဲ့ ။ ဝေးပါသေးတယ်ဗျာ။ ဒီလိုသာ လုပ်လို့ ရစတမ်းဆိုရင် ဟောဒီက “အီဖေကိုယ်” တို့ ချမ်းသာတာ ကြာလှပြီပေါ့။
မကောင်းပါဘူးဗျာ။ ဘောလုံးပွဲများ အကျင့်ကို မကောင်းဘူး။ အခု ချတွက်ကြည့်။ ဘယ်အသင်း နိုင်မယ်ဆိုတာ “ကွက်တိ” မှန်အောင် ပြောနိုင်တယ်။ အဲ – မှန်တယ်ကွ ဆိုပြီး ထ, လောင်းကြည့်လိုက်။ သောက်တလွဲ ဖြစ်ကုန်ရော။ ဘယ်မှန်မှာလဲဗျာ။ “လောဘ” ဆိုတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်က ဦးစီး နေတော့ “အမှန်တရားလည်း” ထွက်ပြေးတော့တာပေါ့။
ဗေဒင် မမှန်ဘူးဆိုရင် “အကြားအမြင်တို့ ၊ နတ်ကတော် တို့၊ ဘိုးတော် တို့ ၊ အဘ,ရသေ့ တို့” ဆီ သွားကြဦးမယ် ဆိုတဲ့ လူတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန်လေး။
“အီးတီ” ဆိုတာ ကြားဘူးကြမှာပေါ့။ အင်မတန်မှန်တဲ့ နိုင်ငံကျော်/ ကမ္ဘာကျော် အကြားအမြင် ပညာရှင် တစ်ဦးပေါ့။ သူ့ရဲ့ ဦးလေးအရင်းဖြစ်တဲ့ “ဒေါက်တာမျိုးဝင်း” ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးပါတယ်။ ဒေါက်တာမျိုးဝင်းက “လူသေချာတစ်ဦး ဗျ” ။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2006 ခု ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ သူလည်း သူများတွေလို “ရွပိုးထိုး”လာတယ်။ အလောင်း အစားလေး လုပ်ချင်လာတယ်။
အဲဒီမှာ “တူမ” ဖြစ်သူ အကြားအမြင် ပညာရှင် အားကိုးနဲ့ လုပ်ပါလေရောဗျာ။ အရမ်းတော့ မလုပ်ဘူးနော်။ သူက “လူသေချာ” လေ။ သိတယ်မဟုတ်လား။ ပထမဆုံးပွဲကနေ (၇)ရက်ဆက်တိုက် “သူ့တူမ အီးတီ” ဆီကို ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေး ပြီး ကနေ့ ဘယ်သူတွေနိုင်မလဲ . . ဆိုတာ လှမ်းမေးတယ်။ လုံးဝ မလောင်းသေးဘူးနော်။
အီးတီရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကလည်း လုံးဝ မှန်တယ်ဗျာ ။ တစ်ပွဲမှ မလွဲဘူး။ (၇)ရက် ဆက်တိုက်နော်။ အဲဒီတော့မှ သေချာပြီ ဆိုပြီး (၈)ရက်မြောက်နေ့မှာ “သူ စ,လောင်းတယ်” ။ သူတွင် မကဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေကိုပါ စည်းရုံးလိုက်ပြီး “အီးတီ” ပြောတဲ့ အသင်းကို ၀ိုင်းလောင်းကြတယ်။
နောက်ဆုံး ပြောရရင်တော့ အင်မတန် မှန်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ “အီးတီး” လည်း အဲဒီနေ့ကနေ စ,ပြီး လွဲတော့တာ ပါဘဲဗျာ။ အားလုံး ၀က်ဝက်ကွဲ ရှုံးကြပါတယ်။
အမှန်က အီးတီ မမှားပါဘူး။ သူ့ကို အသုံးချဖို့ ကြံကြတဲ့ သူတွေသာ မှားတာပါ။ ဗေဒင်ပညာ အပါအ၀င် အတတ်ဟော ပညာတွေက ဒီလို အသုံးချလို့ မရပါဘူး။ ရရင် ဗေဒင်ဆြာတွေ အရင်ချမ်းသာကုန်ကြပြီပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါကြောင့် အခုလာမယ့် 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံး ၀ိုင်းပြီး ကြည့်ကြမယ်။ အားပေးကြမယ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်း ကြမယ်။ ပျော်ကြမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဇွန်လ (၅)ရက်နေ့ကနေ စ,ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဟောကိန်းတွေ ၊ ခန့်မှန်းချက်တွေကို စ,ပြီး တင်ပေးသွားမယ်။ ဒီလို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီး ကြည့်မှ အသဲတဖိုဖို ရင် တလှပ်လှပ်နဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတာ ကလား။ ၀ါသနာရှင် ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလည်း ဒီ ခန့်မှန်းချက်တွေကို နေ့စဉ် လာရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ ခန့်မှန်းချက်တွေကို အားကိုးပြီး (စီးပွားဖြစ်) အလောင်းအစားကိုတော့ မလုပ်ကြစေလိုပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ပိုင်းဟာ “အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ” သက္ခတ် များအတွင်းရောက်နေသူများ အထူးရှောင်ပါ။ “ရှိတာ အကုန် ကုန်သွားမယ် နော်” ။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ ဒီလို ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ ကြုံလာရင် “အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ၊ ကြာသပတေး” (၄)ခွင်ထဲရောက်နေသူတွေ အများဆုံး “ဘ၀ပျက်” တတ်ကြတယ်။ ကိုယ်တွေ့တွေ များလှပါပြီ။ ကယ်ပါဦး ဆရာ ဆိုတာတွေ များလှပါပြီ။ ဒီတော့ လောင်းချင်ရင် “လဘ္ဘက်ရည်ကြေး၊ ဘီယာကြေး၊ ထမင်းကျွေးကြေး” လောက် ဆိုရင် တော်လောက်ပြီ ပေါ့ဗျာ။
ဆရာကြီး လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကိုယ်တိုင် “ဘောလုံးပွဲကြောင့် မြေကွက်တစ်ကွက် ဆုံးရှုံးဘူးလို့” သတိပေးနေ တာပါ။ ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်ကျော် လောက်ကပါ။ “ပြင်သစ်” ဗိုလ်စွဲ သွားတဲ့ (1998) ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ မှာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ဗေဒင်ဆရာ ဘ၀ကို မရောက်သေးပါဘူး။ အဲဒီ ဘောလုံးပွဲကနေ စ,ပြီး စီးပွားပျက် ဘ၀ပျက်လိုက်တာ – အဲဒီ 1998 ခုနှစ်မှာ ရှိတာ အားလုံးကုန်ပြီး ဗေဒင်ဆရာဘ၀ကို ရောက်လာခဲ့တော့တာပါဘဲဗျာ။
အဲဒီမှာ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ဗေဒင်ပညာလည်း မကယ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ “လောဘ” သိပ်ပါတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အပျော်လုပ်တာ, အပျော်လုပ်တာ နဲ့ ပါ, ပါသွားတာ။ လှေမျောရင် လှေနဲ့ လိုက်၊ ငွေမျောရင် ငွေနဲ့ လိုက် ဆိုပြီး လိုက်ရင်း . . လိုက်ရင်း နဲ့ စာရင်းချုပ် လိုက်တော့ (မြေကွက်တစ်ကွက်) အရှင်းပြုတ် သွားတာပါဘဲဗျာ။
ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို အားလုံး သတိပြုနိုင်အောင်လို့ ဝေမျှပေးတာပါဗျာ။
ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အပြစ်ကင်းစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged soccer world cup, south africa world cup, world cup 2010, ကမ္ဘာ့ဖလား ဘယ်သူနိုင်မလဲ, ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀, ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ, တောင်အာဖရိက ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲ	# ဘလော့ဂါရယ် လိုက်ခဲ့ပါလား . . .Published May 21, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	(လျှပ်တစ်ပြက် သတင်းဂျာနယ် snapshot-news မှ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်သော ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းကို http://www.snapshot-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4771:2010-05-14-20-15-23&catid=321:vol2-no85&Itemid=120 တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်)
အင်တာနက်ပေါ်တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသား ဖော်ပြထားသော ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလော့များ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးတက် များပြားလာသလို ဘလော့ရေးသူ မြန်မာဘလော့ဂါများ ဦးရေမှာလည်း လိုက်ပါ မြင့်တက်လာကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘလော့ (blog) ရေးသူများမှာ ပြည်တွင်းကရော ပြည်ပကပါ ဖြစ်ကြရာ News Media ခေါ် အင်တာနက်သည် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတို့ကဲ့သို့ အရေးပါသည့် မီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်လာသည့်အားလျော်စွာ ယနေ့အချိန်အခါတွင် မြန်မာဘလော့ဂါများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ချန်လှပ်ထား၍ မရတော့ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် သင်္ကြန်ကာလက ဖြစ်စဉ်တစ်ခုက သက်သေခံနေပါသည်။
နေ့စဉ်ထုတ်၊ အပတ်စဉ်ထုတ် ပုံနှိပ်မီဒီယာများထက် News Media ခေါ် အင်တာနက်ဝဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့တို့၏ အားသာချက်မှာ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရုပ်ပုံများ၊ သတင်းစာသားများ၊ အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို ချက်ချင်းဆိုသလို လွှင့်ထုတ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် သူ့အာနိသင်ကမသေးလှ။
သတင်းခေတ် Information Era တွင် သတင်းဖြစ်ချိန်၊ သတင်းရေးချိန်၊ သတင်း ထုတ်လွှင့်ချိန်တို့က မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပြက် အတွင်း စက္ကန့်ပိုင်း၊ မိနစ်ပိုင်းသာ ခြားလျက် အင်တာနက် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလော့များဆီမှ ကမ္ဘာအနှံ့လူထုထံ စီးဆင်းလို့ သွားနေပြီဖြစ်၏။ အိတ်ဆောင် ကွန်ပျူတာ၊ Pod ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း ရှိသူများ ဆိုလျှင် လမ်းပေါ်သွားရင်းနှင့်ပင် သတင်းအချက်အလက် တွေကို သိနိုင်သည်။
ပုံနှိပ်မီဒီယာနှင့် အင်တာနက်မီဒီယာ ကွာခြားချက်မှာ တင်ပြသည့်ပုံစံနှင့် စာဖတ်သူ၏ တုံ့ပြန်သံ ရရှိပုံခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖတ်ရှုသူ၏ တုံ့ပြန်သံမှာ ချက်ချင်းရသည်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာကတော့ ချက်ချင်း ရလျှင် ရနိုင်သော်လည်း အခါတိုင်းတော့ မဟုတ်။
”ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ သူရေးတဲ့ဘလော့မှာ ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာနဲ့ အင်တာနက် မီဒီယာ ကွာတာက ဘလော့ကနေ့တိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်နေမှ အောင်မြင်နိုင်တယ်။ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာက တစ်လမှာဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုကောင်းကောင်း ရေးရင်ရပေမယ့် ဘလော့တွေက နေ့တိုင်း ကိုယ်ရေးတာတွေကို စိစစ်ပြီး တင်ဆက်ပေးနေမှ ကိုယ့်ဆီလာတဲ့ သူတွေ ပိုများလာမယ်။ ပိုကြိုက်လာမယ်လေ”ဟု မြန်မာအိုင်တီပညာရှင် တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြသည်။
ဘလော့များတွင် cbox ဟုခေါ်သော စာရိုက်ထည့်ရသည့် အကွက်ငယ်တွင် ဝင်ကြည့်ဖြစ်သည်။ ဘလော့ကို မိမိစိတ်ကြိုက် မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ စာဖတ်သူ၏ တုံ့ပြန်သံကို ချက်ချင်းကြားရသည်။ ကိုယ့်မှာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို ချက်ချင်း သိခွင့်ရသည်။ ဘလော့ဂါများ၏ ဘလော့များတွင် ရေးသူ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်းကို တင်ထားတတ်ကြပြီး နာမည်အရင်းနှင့် ဓာတ်ပုံကိုပါ ဖော်ပြလေ့ရှိကြ၏။
ယင်းအချက်သည်ပင် မိမိရေးသည့် ဘလော့အပေါ် မိမိတာဝန်ယူလိုသည့် ဘလော့ဂါများ ရှိနေကြောင်း ပြနေခြင်းပါဟု ဆိုသည်။ အချို့ဘလော့များတွင် အတိုက်အခိုက် များလွန်းလှသဖြင့် cbox ကို ဖြုတ်ထားသည်လည်း ရှိ၏။
ယခုဆိုလျှင် မြန်မာဘလော့ဂါများ လွှင့်တင်သည့် သတင်းနှင့် သတင်းဓာတ်ပုံများကို သတင်းဌာနများက ကူးယူ အသုံးချလာသည် အထိ တွင်ကျယ်လာသည်။ (၂ဝ၁ဝ)သင်္ကြန်တွင် သွေးထွက်သံယိုမှု အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ရာ ထိုဖြစ်စဉ်များကို မြန်မာဘလော့ဂါ တစ်ဦးက ကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံရိုက်၍ သတင်းယူသည်။ ပြီးနောက် သူ့ဘလော့ပေါ်မှ လွှင့်တင်လိုက်သည်။ သူလွှင့်တင်လိုက်သည့် သတင်းဓာတ်ပုံများမှာ ရှားရှားပါးပါး ရခဲလှသည့် ပုံကောင်းများဖြစ်သဖြင့် သတင်းဌာနများက သူတို့ဝဘ်ဆိုက်များတွင် ဘလော့ဂါ၏ နာမည်နှင့်တကွ ဖော်ပြပေးသည်။
သူရိုက်သည့်ပုံများကို အခြားဘလော့ဂါ တစ်ယောက်ကလည်း သတင်းဌာနတစ်ခုကို ခပ်တည်တည်နှင့် နာမည်ခံဖို့ ကြံသည်။ အငြင်းအခုံ၊ အလှုပ်အခတ် ဂယက်တစ်ခုက အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင် ဖြစ်ပွားသွားခဲ့ရသည်။ ဤဖြစ်စဉ်နှင့် ၄င်းဘလော့ဂါ၏ image မှာ တစ်မုဟုတ်ချင်း လင်းလက်သွားခဲ့ရသလို ဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာဘလော့ဂါများ ကြားတွင် စောကြောစရာ ဖြစ်လာခဲ့ရကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာဘလော့ဂါများ အတွက် မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စမှာ ဤဖြစ်စဉ်တွင်များစွာ ပေါ်လွင်သွားခဲ့ရတော့သည်။
သူများဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့တွင်ရေးသမျှ ကူး၍ လွှင့်တင်နေသည့် မြန်မာဘလော့ဂါ အချို့ရှိသော်လည်း မြန်မာဘလော့ဂါ အများစုကတော့ သူတို့ရေးသမျှ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကိုယ်တိုင်အားထုတ်၊ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ၊ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ပြီးမှ အင်တာနက်ပေါ် လွှင့်တင်လာကြသည်ကို ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အားရဖွယ်ရာ မြင်တွေ့လာရသည်။
အိုဘားမား သည်ပင်လျှင် သမ္မတမဖြစ်မီ၊ မဲဆွယ် ကာလတုန်းက သူကိုယ်တိုင် ဘလော့တစ်ခုရေးသည်။ သူ့မဲဆွယ်မှု တွင် အွန်လိုင်းကို သုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိုဘားမားသမ္မတ ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၏ အကြောင်းများတွင် ကိုယ်တိုင် ဘလော့ ရေးတင်ခြင်း၏ အာနိသင်ကို ချန်လှပ်ထား၍မရ။ မီဒီယာကို အသုံးချခြင်းများတွင် အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုပါ အသုံးချနိုင်ပါမှ တန်ကာကျမည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ကမ္ဘာမှ နိုင်ငံရေးသမားများ လက်ကိုင်ပြုလာသည် အထိ အင်တာနက်မီဒီယာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုက စူးရှလှ၏။
”ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပဲ တင်တယ်။ စာအုပ်ဖတ်တာက အစ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးမှ တင်တယ်။ ဒီဥစ္စာအတွက် စာဖတ်သူတွေနဲ့ ကျွန်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြစ်ရတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့နေ ဘလော့ဂါတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ မြန်မာလူငယ်ဘလော့ဂါက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် ”ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေနဲ့ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေ ပိုပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မယ် ဆိုရင် ကောင်းတဲ့ အလားအလာ ဖြစ်မှာပါ” ဟုဆိုသည်။
ဘလော့(blog) ဆိုသည်မှာ weblog ဆိုသည့်စကားလုံကို Jorn Barger ဆိုသူက (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှာ စတင်တီထွင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး blog ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းကို Peter Merholz ဆိုသူက ၄င်း၏ ဘလော့၏ ဆိုက်ဘားတွင် We blog ဟူ၍ (၁၉၉၉)ခုနှစ်၊ ဧပြီနှင့်မေလခန့်တွင် စတင်ဖော်ပြ သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ယင်းမတိုင်မီ (၁၉၉၄)ခုနှစ်၊ ဧပြီနှင့် မေလခန့်တွင် စတင်ဖော်ပြ သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယင်းမတိုင်မီ (၁၉၉၄)ခုနှစ် ဝန်း ကျင်ကနှင့် online diary အွန်လိုင်း နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ ရေးသားခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခု နောက်ပိုင်းတွင် WordPress, Movable Type, Blogger, Multiply, Live Journal စသည့် Blogging Sogtware များကို လူအများ အလွယ်တကူ သုံးစွဲလာနိုင်သည့်အခါ ဘလော့ (blog)ဆိုသည့် စကားလုံး အရှိန်အဟုန် ကြီးမားစွာဖြင့် နေရာယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(၂ဝဝ၅)ခုနှစ်၊နောက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မြန်မာအက္ခအရာဖြင့် ရေးသားဖော်ပြရန် အဆင်ပြေသည့် ယူနီကုဒ်များလည်း ဇော်ဂျီမြန်မာ ယူနီကုဒ် က မြန်မာဘလော့များ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍက ရပ်တည်ခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ မြန်မာ့မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် (၂၁)ရာစုအတွက် မြန်မာ ဘလော့ဂါများ အရေးပါမှုကို (၂ဝ၁ဝ)သင်္ကြန်ဖြစ်စဉ်က သက်သေပြလိုက်ပြီဟု ဆိုနိုင်မလား မသိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် သုံးစွဲသူများ ကြားတွင် ဘလော့ဂါများ အကြောင်းကတော့ ဆက်လက် ဆွေးနွေးဖြစ်နေဦးမည်မှာ သေချာပါသည်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged Blog, Blogger, ဘလော့ဂါ, ဘလော့ဂ်	ရေတစ်အိုး ၊ မိုးတစ်ပေါက်Published May 18, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်စောစောကြီးမှာဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်က မိတ်ဆွေတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ “မနီနီဇော်” ဆီက မေးလ်တစောင် ဝင်လာပါတယ်။ စာထဲမှာ -
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း စတင်ဖြစ်ပေါ် (အောက်မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် နောက် နှစ်ရက်မှ သုံးရက် အတွင်း မိုးရွာသွန်းမည်) . . တဲ့။
တကယ့် သတင်းကောင်းပါဘဲဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီသတင်း တကယ်မှန်။ မမှန်ဆိုတာကို “ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ဗေဒင်နည်း လေးတွေ” နဲ့ စစ်ဆေး ကြည့်ရသေးတယ်။ သတင်းပေးသူကို မယုံလို့ မဟုတ်ပါ။ သေချာအောင်လို့ပါ။ ချက်ချင်း ကောက်တွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ဒီသတင်းအတိုင်း အမှန်ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတာတွေ့ရသဗျ။ ဝမ်းသာ လိုက်တာဗျာ။ မျှော်လိုက်ရတဲ့ ဒီမိုး။ ကိုယ့်အတွက်ချည်း သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ အပူဒဏ်ကြောင့် ဖျားနာ၊ သေကြေပျက်စီးနေကြတဲ့ “ပြည်သူပြည်သားအားလုံး” အတွက်က အဓိကပါ။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged ပထမဆုံး မိုး, မုတ်သုံ, မုတ်သုံမိုး, မုတ်သုံရာသီ, မုတ်သုံလေ, ရေတစ်အိုး မိုးတစ်ပေါက်	# အပူ နှင့် အအေး ထိပ်တိုက်မတွေ့စေလိုPublished May 14, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကြည့်ပါဦး။ မနေ့က (၁၃-၅-၂၀၁၀)ထုတ် “ကြေးမုံ နဲ့ မြန်မာ့အလင်း” သတင်းစာတွေမှာ နာရေးကြော်ငြာတွေ များလိုက်တာဗျာ။ ခါတိုင်း စာမျက်နှာ (၁)မျက်နှာလောက်ဘဲ ပုံမှန် ရှိနေရာက မနေ့က စာမျက်နှာ (၄)မျက်နှာ အပြည့် နာရေးကြော်ငြာ တွေဗျာ။ အသက် (၇၀) (၈၀)တွေ ကတော့ အများဆုံးပေါ့။ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းတာက ကျွန်တော့် အတွက် “ဆရာလို တမျိုး၊ ဦးလေးလို တဖုံ” ခင်မင်လေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာ ဆရာဝန်ကြီး “ဒေါက်တာ ကမ္ဘောဇခင်လှိုင်” ပါ ကွယ်လွန် သွားရ ရှာပါပြီ။
တနေ့ထက် တနေ့ ပြင်းထန်လာတဲ့ နွေရာသီရဲ့ အပူဒဏ်အောက်မှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ “တဖြုတ်ဖြုတ်” ကွယ်လွန်ကုန်ကြ ရှာပါ ပေါ့လား။ တလောကလည်း ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးတွေကို အမြဲရေး, ရေးနေတဲ့ စာရေးဆရာကြီး “သာဂဒိုး” လည်း ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ “အပူဒဏ်” ကြောင့်ပါဘဲ။
အသက်ကြီးတဲ့ လူကြီးတွေ ၊ နာတာရှည်ရောဂါများ ခံစားနေရသူတွေ အပူဒဏ် မခံနိုင်ဘဲ ကွယ်လွန်တာကတော့ ထားပါတော့။ ဘာရောဂါမှလည်း မရှိ၊ အရွယ်ကလည်း သန်စွမ်းကျန်းမာနေဆဲ “လူငယ်တွေ” ပါ တော်တော်များများ ဆုံးပါးနေကြတဲ့ ကိစ္စလေးတော့ သတိပေးလိုတာကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်း, အပူ နှင့် အအေး, ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်ခြင်း, ရေခဲရေ အန္တရာယ်, လေဖြတ်ခြင်း	# 48 မြောက် မွေးနေ့ရောက်ခဲ့ . . .Published April 11, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီနေ့ ဧပြီလ(၁၁)ရက်နေ့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ အသက် (၄၈)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက် ဘာကိုမှ မရေးခင်၊ မပြောခင် ပထမဆုံးပြောချင်တာက “အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မရောက်ခင် ပြီးခဲ့တဲ့ (၁)လအတွင်းမှာ ကျွန်တော် အတော်လေး မကျန်းမမာဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မကျန်းမာတာကို သတင်းစကား ကြားသိကြတဲ့အတွက် C-box ထဲကနေရော၊ မေးလ်နဲ့ပါ မေးမြန်းကြတဲ့၊ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း မသိလိုက်ကြလို့ မမေးမြန်း နိုင်ကြတာပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း အသိမပေးခဲ့ပါဘူး။ မေးမြန်းကြတဲ့သူတွေကလည်း တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ ကြားသွား ကြဟန် တူပါတယ်။
စိတ်ပူပင်စွာနဲ့ မေးမြန်းခဲ့ကြတဲ့ – ကို Kelvin နဲ့ မမိုးသိုက်၊ ကိုတေးအေးရိပ်၊ ကိုရမ်းဂန်း၊ ကိုချမ်းမြေ့ဦး၊ မစောလှမြတ်၊ လွင်စိုး၊ မနီနီဇော်၊ မကဲကဲ၊ မမွန်၊ မချို၊ မေဇူး၊ modeiboy.boy ၊ မချောချော၊ မမေရီ၊ မခင်ခင်၊ ကိုကျော်မင်းထွန်း၊ ကိုပြည့်ဖြိုးကျော်၊ Fionas’MUM၊ စန်း၊ သီတာ၊ မမေမွန်၊ မစန္ဒာ၊ မသက်၊ ကေ၊ kissdevil ၊ lei lei lwin ၊ NTA၊ Thwezaraung ၊ ဇော်ဇော်မြင့်၊ Loveboylay ၊ မခင်မျိုးနွယ်၊ ကိုမျိုးချစ်၊ နန်းစောလေး၊ ytt တို့နဲ့ ကျန်သူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးမိပါတယ်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged happy birthday, my birthday | 1 Comment	ထူးခြားသော သာသနာ့အာဇာနည်တစ်ပါးPublished January 22, 2010 | By dr.tin bo bo	.
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged အမှာ သတင်းစကား, အရှင် ၀ါယာမိန္ဒ, မြောက်ဦး ဆရာတော် | 27 Comments	# ဂုဏ်ယူပါသည် . . ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန် သို့Published January 6, 2010 | By dr.tin bo bo	.
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged ဆရာ ဒဂုန်, ဆရာကြီး ဒေါက်တာဒဂုန်, နက္ခတ်ဗေဒင် စာရေးဆရာကြီး, ပုဏ္ဏား ပညာရှိ, ဗေဒင် ကျောင်းအုပ်, မောင် ဒဂုန် |2Comments	# 2012 မှာ တကယ်ကမ္ဘာပျက်မှာလား ?Published November 13, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, အမှာ သတင်းစကား | Tagged 2012 မှာ တကယ်ကမ္ဘာပျက်မှာလား ?, Myanmar Astrology, အမှာ သတင်းစကား |5Comments	# ဘာသာရေး နှင့် ဗေဒင်ပညာPublished September 27, 2009 | By Dr.Tin Bo Bo	(ဤဆောင်းပါးသည် မိမိ၏ ကွန်းမန့်ထဲတွင် လူတစ်ယောက်က “ဘာသာရေး နှင့် ဗေဒင်ကို မရောယှက်ပါနှင့်” ဟု ရေးလာခြင်းကြောင့် ချက်ခြင်းကောက်ရေး လိုက်သော ဆောင်းပါးဖြစ်ပြီး ဆောင်းပါးတွင် – မိမိ၏ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်လွယ် သော အားနည်းချက်များကြောင့်- စကားအသုံးအနှုံးများ ရင့်သီးမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မိမိ၏ ဗီဇအတိုင်း အချိန်ကြာလာလျှင် စိတ်ပြေမြဲ ဖြစ်သောကြောင့် စကားအသုံးအနှုံးအချို့ကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အချို့စာပိုဒ် များ ကိုလည်း ဖြတ်တောက်ထားပါသည်။ မိမိ၏ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်လွယ်သော အားနည်းချက်ကြောင့် ယခင် ဆောင်းပါးမူရင်းကိုဖတ်ရှုပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ခဲ့သော သူများရှိခဲ့လျှင် အားလုံးအား အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါသည်ခင်ဗျား)
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ “ထေရ၀ါဒ” ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုပြီး သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဂိုဏ်းကွဲကြီး (၂)ခု ကွဲထွက် သွားပါတယ်။ “ဟိနယာန” ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်း နဲ့ “မဟာယာန” ဂိုဏ်းတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ “ဟိနယာန” ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “ထေရ၀ါဒ” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘာသာရေး သမိုင်းကို အဓိကထား ဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အကြမ်းဖျဉ်း ပြောရရင် “မဟာယာန” အယူဟာ “မန္တရ၊ တန္တရ၊ ဂါထာ၊ မန္တယား၊ ဗေဒင်၊ အင်းအိုင်၊ လက်ဖွဲ့” တွေနဲ့ ရောယှက်နေတဲ့ အယူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ ယေဘူယျ သတ်မှတ် ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာအယူထွန်းကားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံထဲက “ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ” ကျတော့လည်း ဒီလိုဟာတွေ မပါတဲ့ “ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ရှုတဲ့” ၀ါဒဖြစ်နေပြန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထေရ၀ါဒနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရှင်တွေကတော့ “မဟာယာန” ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်းကြီးသာ ဖွင့်မချပေမယ့် (စိတ်ထဲမှာ ခံယူချက်အနေနဲ့) မှန်ကန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ယူဆတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပိုများပါတယ်။ (ကျွန်တော့်အယူအဆမဟုတ်ပါ)
ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီတော့ “ထေရ၀ါဒ” နိုင်ငံတွေထဲမှာတောင်မှ “ဒို့ ထေရ၀ါဒ ကမှ အစစ်မှန်ဆုံး” ဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကျော်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာရော စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ မဟာယာန အနွယ်ဝင် “မန္တရ၊ တန္တရ၊ ဂါထာ၊ မန္တယား၊ ဗေဒင်၊ အင်းအိုင်၊ လက်ဖွဲ့” တွေနဲ့ လုံးလုံး ကင်းရှင်းနေရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါတယ်။ မကင်းပါဘူးခင်ဗျား။ မကင်းနိုင်သေးပါဘူး။ မကင်းနိုင်သေးလို့ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေမှာ ဂြိုဟ်တိုင်တွေ၊ ဂြိုဟ်မင်းတွေ၊ ဘိုးဘိုးကြီး နတ်နန်းတွေ၊ နတ်ကွန်းတွေ၊ တောပိုင်တောင်ပိုင်နတ်နန်းတွေ စတဲ့ “တန္တရ၊ မန္တရ ” နဲ့ နှီးနွယ်နေတဲ့ အရာတွေ တွေ့မြင်နေကြရတာ မဟုတ်ပါလား။ (အပေါ်က ပုံကိုကြည့်ပါ။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ဂြိုဟ်ပြေနံပြေဒေါင့်တစ်ခုမှာ ယတြာချေနေကြတာ။ သီလရှင်တောင် ပါလိုက်သေး)
ဒီဂြိုဟ်တိုင်တွေဟာ ဘာဖြစ်လို့ “ထေရ၀ါဒစစ်စစ် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ” တစ်ခုက ဘုရားတွေမှာ ရှိနေရတာလဲ။ ဘာလို့ လူတွေ ဘုရားရှေ့မှာ လာပြီး ယတြာချေ နေကြ ရတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဘုရားစေတီတွေ တည်ရင် ဗေဒင်ဆရာတွေနဲ့ “နေ့ကောင်း၊ ရက်ကောင်း၊ နက္ခတ်ကောင်း တွေ” တွက်ချက်ပြီးမှ တည်ရတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓ၀င် စာအုပ်တွေမှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဇာတာတော်တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြနေကြတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ရဟန်းသံဃာ ကြီးတွေရဲ့ အထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်တွေမှာ ဆရာတော် လောင်းလျာရဲ့ ဇာတာခွင်ဆိုပြီး ဗေဒင် ဆိုင်ရာတွေကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြနေကြသလဲ။ နောက်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ခြေတော်ရာဆိုတာကရော ဘာလဲ။ လောကမှာ အတုမရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာ ပါတဲ့ “စက်လက္ခဏာ” အမှတ်အသားတွေပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကရော ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ ပညာကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကြီး ချပြထားတာ မဟုတ်ပါလား။ အောက်မှာ ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာပုံ တစ်စုံကို ပြထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ကယ် ကိုးကွယ်ရမှာက ခြေတော်ရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရဲ့ ဉာဏ်တော်ကို ကိုးကွယ်ရမှာ။ ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမကို လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမှာ မဟုတ်လား။ ဒါတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတ တွေပါ။
ဒါတွေက ဘာကို ပြောပြနေသလဲ ဆိုတော့ “ထေရ၀ါဒစစ်စစ်” ပါလို့ ကြွေးကျော်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံမျိုးတောင်မှ ဘာသာရေးဟာ “ဗေဒင်ပညာ၊ လောကီပညာ” တွေနဲ့ မကင်းနိုင်ကြသေးဘူးဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား ပြသနေတာပါဘဲ။ ဟိုးအရင်တုန်းကလည်း မကင်းခဲ့ဘူး။ အခုလည်း မကင်းဘူး။ နောင်လည်း ကင်းမှာ မဟုတ်သေးဘူး။
လောကီဒုက္ခသံသရာထဲမှာ ကျင်လည်နေကြရတဲ့ လူသားတွေဘဲဗျာ။ ဒုက္ခတွေ့လာရင် အားကိုး ရှာကြမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်း “ငါ့ကို ကိုးကွယ်ရာဟု မအောက်မေ့ ကြလေနဲ့၊ ငါဟောကြားထားသော တရားဓမ္မတို့ကိုသာ ကိုးကွယ် ကြလော့” လို့ ဆိုထားတော့ ဘုရားကိုလည်း အားကိုးလို့က မရပြန်။ ဒီတော့ ဒုက္ခက လွတ်အောင် ဗေဒင်တွေ၊ ယတြာတွေဘက် ရောက်လာကြတော့တာပေါ့ဗျာ။ ဘုရားစေတီဌာနတွေ ဆိုတာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အထွဋ်အမြတ် နေရာတွေ ဖြစ်လေတော့ ဒီဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာတက်ပြီး (ဘုရားကို အမှူးထား၍ ပေါ့ဗျာ) ဂြိုဟ်မင်းတွေ၊ ဂြိုဟ်တိုင်တွေ၊ နတ်နန်းတွေ၊ ဓာတ်ခန်းတွေ၊ ဗေဒင်ဆိုင်ခန်းတွေ ဖြစ်လာကြတာပေါ့ဗျာ။
တစ်ကယ်တန်းကျတော့ ဒီလိုကိစ္စတွေဟာ ဗဟိဒ္ဓ ကိစ္စတွေပါ။ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထင်အမြင် သေးလိုက်ရင်တော့ မှားသွားမယ်။ လောကမှာ ဘယ်အရာမဆို “အကာရယ်၊ အနှစ်ရယ်” ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်ကယ်ယူရမှာက အနှစ်ဖြစ်ပြီး အကာကို ပယ်ပစ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ “အကာကို ပစ်ပြီး အနှစ်ကို ရှာကြပါ” ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရက စေတီလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ရုပ်ပွားတော်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဓါတ်တော်မွေတော်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေက အထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတ တွေပါ။ ဒါတွေတောင်မှ အနှစ်သာရ မဟုတ်ရင် စောစောက ပြောတဲ့ ဂြိုဟ်မင်း၊ ဂြိုဟ်တိုင်၊ နတ်နန်း၊ ဘိုးတော် တွေဆိုတာက တစ်ကယ့် အပေါ်ယံအလွှာ အကာသက်သက်တွေပါ။
တစ်ကယ့် အနှစ်သာရက “လက္ခဏာရေး (၃)ပါး ၊ သစ္စာ(၄)ပါး နဲ့ မဂ္ဂင်(၈)ပါး” တရားတွေပါ။ ဒီအနှစ်သာရတွေကို ထိန်းသိမ်းထား နိုင်သရွေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကွယ်ပျောက်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။
ဒီတော့ သူ့ဟာသူ ဗေဒင်နက္ခတ်တွေဘဲ ၀င် ပါ,ပါ။ ဂြိုဟ်မင်းဂြိုဟ်တိုင်တွေဘဲ ထား,ထား။ ဘိုးတော်တွေ နတ်နန်းတွေဘဲ ရှိ,ရှိ – တစ်ကယ့် အနှစ်သာရ မကွယ်ပျောက် ဖို့သာ အဓိကပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီအနှစ်သာရတွေ မပျောက်ကွယ်သေးလို့သာ ဟောတစ်ပါး၊ ဟောတစ်ပါး ဆိုပြီး “ရဟန္တာ အရှင်မြတ်” တွေ ထွက်ပေါ်နေခြင်း မဟုတ်ပါလား။
မြန်မာလူမျိုး အတော်များများကလည်း (မကင်းနိုင်လို့သာ ဗေဒင်ယတြာတွေ၊ ဂြိုဟ်ပြေနံပြေတွေ လုပ်နေကြရပေမယ့်) ဒါကို နားလည် ကြပါတယ်။ နားမလည်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ရင်တော့ ဗေဒင် နဲ့ ဘာသာရေး ကင်းကွာ လို့မရဘူး ဆိုတာရယ်။ ရောယှက်နေသယောင် ရှိပေမယ့် အနှစ်သာရပိုင်း မှာတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ သတ်သတ်စီဘဲ ဆိုတာ နားလည်လောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်။
တစ်ခုတောင်းပန်ချင်တာက ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးတွေမှာ ကျွန်တော် မှားနေတဲ့ အချက်များ ရှိခဲ့ရင် Comment ထဲကနေ ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်း အရာကို ကိုယ်တစ်ကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်လို့ အကြံပေး ချင်ပါတယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ဗေဒင် မရောယှက်ပါနဲ့လို့ ပြောသူရှိပေမယ့် ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာတော့ ဗေဒင်ရော၊ ဘာသာရေးရော နှစ်ခုလုံး ရောယှက်နေမှာဘဲ။ ကိုယ်က တစ်ကယ်တန်းကျတော့ ဗေဒင်ပညာကို အသက်မွေးမှုအနေနဲ့သာ လုပ်နေရတာ ဖြစ်ပြီး သိပ်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ အနားယူချင်လှပါပြီ။ သေခြင်းတရား ကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည် သဘောပေါက် လာတဲ့ အချိန်ကစ,ပြီး ဘာသာတရားကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားပါတော့တယ်။ ဒါကလည်း အသက်က စကားပြောလာလို့ပါ။ ကိုယ် သေခါနီးလာပြီဆိုတာ ဆင်ခြင်မိလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဗေဒင်ဟောရင်းနဲ့ ကိုယ်နားလည်သလောက် တရားစကားတွေကိုလည်း “တစ်လုံး၊ တစ်ပါဒ” ဆိုတာလို ထည့်ပေးသွားမှာပါ။ ယူချင်သူ ယူနိုင်ပါတယ်။ မယူချင်သူ မယူဘဲ နေလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယူပါ, ယူပါ လို့ အတင်းအကြပ် မတိုက်တွန်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အင်တာနက် ပေါ်မှာ ပြောဆိုရေးသားကြတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ခြင်းစာတရား ရှိကြပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့လို ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးသူတွေက “အလင်းထဲက လူနဲ့တူပါတယ်” ။ Comment ထဲမှာ ၀င်ရေးနေတဲ့ သူတွေကတော့ လူကိုလည်းမမြင်ရ။ နာမည်ကလည်း “နာမည်ဝှက်” တွေနဲ့ဆိုတော့ “အမှောင်ထဲက လူနဲ့ တူတယ်”လို့ ကျွန်တော်တင်စားချင်ပါတယ် ။ အမှောင်ထဲက လူက အလင်းထဲကလူကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပေမယ့် အလင်းထဲကလူက အမှောင်ထဲကလူကို မမြင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျား။ အလင်းထဲကလူဟာ အမှောင်ထဲကလူ ပြုသမျှ နုရမယ့် ဘ၀ပါ။ ဒါကြောင့် အမှောင်ထဲကလူက ချီးမွမ်းသွားရင်လည်း ခံရမှာဖြစ်သလို ဝေဖန်ရှုတ်ချသွားရင်လည်း ခံရမှာပါဘဲ။ နောက်ဆုံး “ကလော်ဆဲသွားလည်း” ခံရမှာပါဘဲ။ “ငါ” နဲ့ ကိုင်တုပ် သွားရင်လည်း ခံရမှာပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခြင်းစာ တရားလေး ရှိကြပါလို့ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged ဘာသာရေး နှင့် ဗေဒင်ပညာ | 10 Comments	# မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေများPublished July 19, 2008 | By Dr.Tin Bo Bo	မင်္ဂလာပါ
ကွန်ပျူ-ဗေဒသုခုမ ရဲ့ ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာသစ် စတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး -
- အထွေထွေ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊
- (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်ဟောကိန်းများ
- မိမိဘ၀ အတွေ့အကြုံများ၊
- ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်များ ကို ဗေဒင်ပညာ ဝါသနာပါသူများအတွက် တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။
= ဗေဒင်ပညာရှင်ကြီးများအတွက် မဟုတ်ဘဲ ဗေဒင်ပညာ နဲ့ လောကီပညာတွေကို လေ့လာခါစ ဝါသနာရှင်များအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
= ဗေဒင်ပညာ လုံးဝမတတ်ကျွမ်းသူများပါ ဖတ်နိုင်အောင် သိပ်အဆင့်မြင့်လွန်းတဲ့ ဗေဒင်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သရွေ့ ရှောင်ကျဉ်ပြီး ရေးသား သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
= ဒီဘလော့ဂ်လေးဟာ သိပ်အဆင့်မြင့်လွန်းတဲ့ ပညာရှင်တွေအတွက်တော့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။
= အဆင့်မြင့်ပညာရပ်တွေကိုတော့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ တင်ဆက်မှာ မဟုတ်ဘဲ ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ်အမည်နဲ့ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ စာအုပ်နှစ်အုပ် ထုတ်ဝေထားပါတယ်။
= ဗေဒင်ပညာအပြင် အခြားသိမှတ်စရာ (ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ရတဲ့) အတွေ့အကြုံ သင်္ခန်းစာများကိုလည်း (လူငယ်များအတွက်) အလျှဉ်းသင့်သလို တင်ဆက်သွားပါမယ်။ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာလုံးပေါ့။
= အသက်က (၅ဝ)နား နီးလာတော့ တရားဘက်ကိုလည်း နည်းနည်းလုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တွေ့သိမြင်လာရတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မရဿ ကိုလည်း အလျှဉ်း သင့်သလို ရေးသားသွားပါမယ်။ ဝါသနာပါရင် ဖတ်ကြည့်ပြီး ဝါသနာမပါရင်တော့ ကျော်သွား နိုင်ပါတယ်။
= စာရေးသူဟာ နိုင်ငံရေးပတ်သက်ရင်တော့ ဝါသနာနည်းလှတဲ့သူမို့ နိုင်ငံရေး၊ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ တိုက်ရိုက်သော်၎င်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း လုံးဝ ရေးသားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗေဒင်ပညာပေး သက်သက် နဲ့ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အကြောင်းလေးတွေကိုသာ “သီးသီးသန့်သန့်” တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ (ဘလော့ဆိုရင် အမြင်စောင်းတတ် ကြလွန်းလို့ပါ)
စာရေးသူဟာ “ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မရဿ” နဲ့သာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေလိုသူဖြစ်ပြီး “လောကကြီးမှာ မည်သူ့ကို မှလည်း အပြစ် မတင်ထိုက်၊ မည်သူ့ကိုမှလည်း မချီးမွမ်းထိုက် – အရာအားလုံးဟာ သူ့အကြောင်းတရား သူ့အကျိုးတရား အတိုင်းသာ ဖြစ်ကြ ပျက်ကြရ သည်သာ” ဆိုတဲ့ ဒဿနကိုသာ ခံယူထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေများ, အမှာ သတင်းစကား |3Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,745)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,409)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,202)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,042)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,069)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,379)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,204)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,709)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,750)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,403)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,355)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,213)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,161)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,411)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,074)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,759)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,754)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,291)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,896)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,780)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,610)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,565)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,353)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,166)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,161)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,060)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !